DAAWO VIDEO DEG DEG Maraykanka oo Tageeray Siyasada Farmaajo Mucaaradka Cuna Qabatayn Saaraya Diidan. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO DEG DEG Maraykanka oo Tageeray Siyasada Farmaajo Mucaaradka Cuna Qabatayn Saaraya Diidan.
DAAWO VIDEO DEG DEG Maraykanka oo Tageeray Siyasada Farmaajo Mucaaradka Cuna Qabatayn Saaraya Diidan.
February 3, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Maanta 2
Dowlada Maraykanka Ayaa Siweyn u Aqoon satay Doorasahada Galmudug ee Dowlada Faderalka Tageeraysey Kana Dhacday Dhuusamareeb,War Qoraal oo kasoo Baxay saafarada Maraykanka Ayaa Dagaal ka Dhex Abuuray Mucaaradka oo u Arka Inuu maraykanka Aqoon saday Doorashadaasi oo kaliya.
Doorashadaas waxaa hareeyay buuq badan, qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradkana waxay u arkayeen in doorashadaas aysan “noqon karin mid xaq iyo xalaal ah”. Waxay ahayd mid ay taageereysay dowladda faderaalka ee Soomaaliya.
Doorashadii lagu doorta Qoorqoor waxaa qaadacay qaar ka mid ah mushaarixiinta doonayay in loolanka xilka madaxweynaha ay qeyb ka noqdaan, iyagoona arrintaas ku sababeeyay kala qeybsanaanta guddiga doorashada oo garab ka mid ah ay ahaayeen xildhibaano taabacsan Ahlu Sunnah.
Dhanka kale, ururka Ahlu Sunna oo dowladda Federaalka ku eedeeyay inay afduubatay doorashada, ayaa sheegay in Sheekh Shaakir ay u doorteen “madaxweyne”.
Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa isna Magaalada Gaalakacyo ku dhistay “baarlamaan”, u doortay “xilka madaxweynaha” Galmudug.
Axmed Cabdi kaariye (Qoorqoor) oo BBC Somali la hadlay ka dib doorashada wuxuu sheegay: “Masuuliyad culus ayaa naloo doortay, oo naloo igmaday. Deegaan iyo dad ay duruufo adag ka jiraan oo xaalado adag ay ka jiraan”.
“Waxaa na saaran in duruufahaas ka jira Soomaaliya gaar ahaan Galmudug inaan ku bixino dadaal,” ayuu hadalka ku daray.
Falcelinta “hambalyadii” safaaradda Mareykanka
Doorashada Galmudug waxay ahayd mid uu “khilaaf hareeyay” marka la eego sida loogu kala qeybsamay iyo dhinacyada iska soo horjeedo.
Siyaasiyiinta mucaradka ah waxay aad u dhaliileen farriinta ka timid safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ku taalla, inkastoo madaxda dowladda aysan soo hadal qaadin.
Haseyeeshee markii la doortay Qoorqoor waxaa markiiba iyadoon Dowladda Federaalka war kasoo saarin Madaxweynaha Cusub u hambalyeeyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Yamamoto.
“Doorashada ka dhacday Galmudug waxay gundhig u tahay dib u heshisiin siyaasadeed. Dowladda Mareykanka waxay cidwalba ugu baaqeysa inay ka qeybqaadato wadahadalo nabadeed, kuwaas oo si wadajir wax loogaga qabanaya dhibaatooyinka ka taagan gobolkaas,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.
“Wa mas’uuliyadda qofwalba saaran in laga hortago khatar walba iyo gacan ka hadal, waxaana u hambalyeeneynaa Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galmudug”.
DEG DEG: Puntland oo qaaday wadadii Somaliland, kuna dhawaaqday la bixida baarlamaankeeda.
DAAWO:- Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland ee kujira Federaalka oo ku hanjabay in ay is casili doonaan “Sabab Cajiib ah”.
Dad yahoow diblumaasiyadda caalamiga isbeddello waaweyn ayaa qaab daraandoori ah iskaga daba dhacaya, kuwaas oo salka ku haya loollan siyaasadeed iyo dhaqaale oo aad u culus. Hannaankii hore ayaa qummaati u diga roganaya kii ay Mareykan iyo Ingiriis dagaalkii labaad ee dunida iyagu sameysteen.
Mareykanka waxaa cadaadis xooggani uu ka soo waajahay Shiinaha, Ruushka, Midowga Yurub iyo Turkiga maadaama ay awooddoodii isaga iyo Ingiriiska qummaati u sii liicayaan teer iyo burburkii dhaqaale ee sanadkii 2008dii. Waxaa ugu sii darsamay kuwoodii laban dal ba oogu cunsurisanaa ee hadda awoodda siyaasadeed dareenkaas toos ugu wiiqday.
USA iyo UK ba Afrika iyo Aasiyada Koonfureed ayay nafta kula soo dul dhacayaan oo ay isleeyihiin yaanay dhaqaale ahaan Shiinuhu idin ka faramaroojisanin. Marinka Badda Cass ee Geeska Afrika ayaa waxii colaaddii Iraan ka dambeeyay loo bartilmaansaday in ay beddesho Marinka Hormuus oo ay noqoto halbowlaha ganacsiga iyo dhaqaalaha caalamiga ee marinnada badeed.
Soomaalida uun baa qaflad kaga jirta mooyaanee Soomaaliya iyo Jabuuti ba way u gashay haddii ba ay fursaddan oogu dahabsan inta ay dhaadaan sha’nigooda Soomaaliyeed iyo qarannimo mideyn lahaayeen. Maxaa kallifay in uu Mareykanku maamul goboleed Soomaaliya ah toos ugu hambalyeeyo bay idin la tahay? Waa damacaas weyn ee Badda Cass salka ku haya oo Soomaaliya loo diiddan yahay in ay Galbeedka farahooda ka baxdo. Waa isla sababtaas waxa ay qawsaarada SNM iminka la kardhanayaan oo ay iskugu dayayaan in ay Laasqoray ilaa Berbera isku helaan.